I-Ruma Kami- Ukungcamla kwe-Bali kunye nokuJonga okumangalisayo - I-Airbnb
I-Ruma Kami- Ukungcamla kwe-Bali kunye nokuJonga okumangalisayo
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguDon
Ndithatha esi sithuba simangalisayo kuNeil & Phylis, abanegama elibalaseleyo kwi-AirBnB njengabamkeli abanokukalelwa ngeenkwenkwezi ezi-5. Ndiyoyika ukuba ndinezihlangu ezikhulu zokuzalisa. Kodwa ndiza kuzama konke okusemandleni am ukuhambisa kumava abawadalile.
Yabucala 1 Bedroom Guest Villa, Ixhotyiswe ngokupheleleyo.
Ifumaneka kwisiqithi sase-Elbow Cay, iRuma Kami inika umbono omangalisayo woLwandle lwase-Abaco. Ukungcamla kwe-Bali kwindawo yabucala ekufutshane neDolophu yeThemba kunye namanyathelo ukuya kwindawo yangasese yamanzi ngaphambili.
I-Ruma Kami Guest yindlu yokulala yabucala e-1 kwi-Ruma Kami estate. I-villa inegumbi lokulala elikhulu labucala elingaphezulu kwebhedi enkulu yenkumbulo kunye negumbi lokuhlambela elitofotofo. Zonke iilinen, iitawuli, kunye neetawuli zaselwandle zinikezelwe.
Iimpawu ezongezelelweyo ziquka ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlala elahlukileyo elinesofa eguqulela kwibhedi enye kunye nedesika yabucala. I-villa ikwabonisa i-A / C ezimeleyo, ijenereyitha yokugcina i-backup, inkqubo yokuzonwabisa yevidiyo kunye nokugubungela okugcweleyo kwe-WiFi kuyo yonke ipropathi.
I-Ruma Kami yenzelwe ukuhlala ngaphandle. Indawo yokuhlala yabucala yangaphandle ine-gazebo efulelwe ngengca enezihlalo ezitshisiweyo kwaye yenza indawo entle yokuphumla ngencwadi elungileyo okanye ukwabelana ngeziphungo zelanga.
Iindwendwe zamkelwa kwindawo yokutyela ekumgangatho ophezulu.
Idokhi yethu yasekuhlaleni inezinyuko ezikhokelela elwandle ukuze uqubhe okanye i-snorkel!
Ukuba uthatha isigqibo sokuqesha isikhephe ngexesha lokuhlala kwakho, unokumisa kwindawo engasemanzini yoluntu emini kuphela.
Esi siqithi sineendawo zokutyela ezininzi ezintle, ivenkile yokuntywila, iirenti ezininzi zezikhephe, iitshatha zokuloba elwandle olunzulu kunye nenye indawo yokugqibela yehlabathi eshiyekileyo yeparafini egxothiweyo, isibane esisebenza ngesandla. Ukuba ulunge ngenene kumntu osebenza kwindlu yesibane, usenokukuvumela ukuba ukhanyise isibane kunye naye ekutshoneni kwelanga.
Iinkonzo zeConcierge ziyafumaneka kuyo nayiphi na into ophupha ngayo esiqithini kwaye sinokukunceda ulungiselele uhambo lwakho.
Umamkeli wakho ukuloo propati kwaye uyafumaneka ukuze akuncede ufumane okuninzi kwiholide yakho yesiqithi. Ungumgqakhwe onamabali amaninzi okudibana nabantu abadumileyo nabadume kakubi eBahamas nakwezinye iindawo.
UDon uyakuthanda ukwazi iindwendwe zakhe kodwa unokuba ngasese njengoko uthanda, ukhetho lolwakho.
I-Elbow Cay imalunga neekhilomitha ezingama-250 ukusuka eMpuma yeWest Palm Beach. I-Elbow Cay yiSiqithi saseBahamian esiziikhilomitha ezi-5 kuphela ubude kwaye malunga nesiqingatha semayile ububanzi kwindawo ebanzi.
Ubumelwane buthule kakhulu, kodwa busondele kuzo zonke iindawo ezinomtsalane kwisiqithi. Unxweme lwethu olusempuma nolusemantla lunqumla kuLwandlekazi lweAtlantiki kwaye lubonisa iikhilomitha ezicocekileyo nezingenanto ezinesanti emhlophe. Iilwandle zibonelela ngamathuba e-snorkel, i-surf, i-kayak, okanye ibhodi yeekite. Kukho neebhari ezininzi kunye neendawo zokutyela ecaleni kolwandle.
Unxweme lwethu olusentshona nolusemazantsi ludanisa uLwandle oluzolileyo oluluhlaza lwase-Abaco kwaye lubonelela ngokuntywila okuhle, ukuhamba ngesikhephe kunye nokuloba.
Iziqithi ezingabamelwane ze-Abaco zihamba nje ngesikhephe esifutshane, njengezinye zezona ndawo zidumileyo zaselunxwemeni zebhari emhlabeni.
Idokhi yoluntu yaseLucayos yeyokusetyenziswa emini kuphela njengoko ingakhuseli emoyeni. .
Yiya eRuma Kami ngeMarsh Harbour International Airport kwisiqithi esisebumelwaneni saseAbaco. Emva koko uhambo olufutshane lweteksi ukuya kwisikhitshane saseHope Town (amalungiselelo anokwenziwa ukuze athathe uhambo lwakho) kunye nemizuzu engama-30 yokukhwela isikhitshane ukuya eHope Town apho ababuki zindwendwe bakho baya kube bekulindele.
Ukutshaya akuvumelekanga ngaphakathi kuso nasiphi na isakhiwo.
I-Ruma Kami ikwindawo yokuhlala yabucala ezolileyo, ilungele iholide yokuphumla nenoxolo.
Kufuphi na iAbaco Inn kunye neFireFly resort ezibonelela ngokutya okumangalisayo, iinketho zokusela, ngelixa besonwabela iimbono zabo zamanzi.